အေးချမ်းလှပတဲ့ တည်းခိုစရာ နေရာများ - LODGGY
Home » Hotel Promotions • Myanmar » အေးချမ်းလှပတဲ့ တည်းခိုစရာ နေရာများ
သီးသန့်လေးနဲ့ လှပတယ်.. အေးချမ်းတယ်..
ဒီလိုနေရာလေးတွေမှာ ချစ်ရသူတွေနဲ့အတူ အချိန်တွေကုန်ဆုံးခွင့်ရသူတွေအတွက်တော့..?
ရင်ထဲ လိပ်ပြာအကောင်တစ်သန်းလောက် ထပျံနေသလိုနေမှာပါ..?
?အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတဲ့ Tiny House အိမ်ပုံစံလေးတွေကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ပထမဆုံး Tiny House လေးပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရောင်စုံအိမ်သေးသေးလေးတွေထဲမှာမှ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ဧည့်ခန်းတွေကို ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အိမ်ပုံစံလေးတွေလည်း အမျိုးစုံပါပဲ။ အိမ်လေးတွေနဲ့ကော၊ အိမ်အထဲမှာပါ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့အရမ်းလှပါတယ်။ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးပေါ်က ခုံလှလှလေးတွေမှာထိုင်ပြီး အေးချမ်းလှပတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ အလှတရားတွေနောက်ကို စီးမျောနိုင်မှာပါ။ ဈေးနှုန်းကတော့ ၂ ယောက်ခန်းကို ၃၅၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ကနေစရှိပါတယ်။
?လိပ်စာ – လမ်းသာယာလမ်း သစ္စာလမ်းသွယ်၊ ဂန္ဓမာမြိုင်ပန်းခြံနှင့် မြို့ပတ်လမ်း (ကန်တော်ကြီးအဝိုင်း) အနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
2.TeaStory – Pyinoolwin
?ပြင်ဦးလွင် အမျိုးသားကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်အနီး လက်ဖက်ခြံလေးထဲ Tent လေးတွေနဲ့ တည်းရတဲ့ နေရာလေးပါ။ Tea Story ဆိုလို့ မသိရင် ကော်ဖီဆိုင်လို့ ထင်ကြလိမ့်မယ်။ လက်ဖက်ခင်းတွေ၊ ကော်ဖီပင်လေးတွေနဲ့ အရမ်းသာယာပြီး Tent လေးတွေနဲ့ သဘာဝဆန်ဆန်ဖန်တီး ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ပြည်တွင်းဖြစ်ပစ္စည်းတွေကို အဓိကအသုံးပြုထားပြီး လျှပ်စစ်မီးအတွက် Solar System ကိုပဲသုံးတာပါ။ နှစ်ယောက်အိပ် Tent လေးတွေအပြင် အဖွဲ့လိုက်တည်းခိုနိုင်တဲ့ tent တစ်ခုလည်းရှိတယ်။ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာတွေကတော့ share သုံးရမှာပါ။ နှစ်ယောက်အိပ် tent လေးတွေက တစ်ညကို ၆၀၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ စုသွားရင်လည်း ပျော်စရာကောင်းသလို၊ ချစ်သူနဲ့အတူသွားရင်လည်း ကြည်နှုးစရာပါ။ သဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့်နေရာတစ်ခု သေချာပါတယ်။
?လိပ်စာ – ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်။
3.Htoongelay Villa – Pyinoolwin
?Farm House လေးမှာ အေးအေးဆေးဆေး နေချင်တဲ့သူတွေအတွက် Htoongelay Villa..နေရာကတော့ ပြင်ဦးလွင် – မိုးကုတ် ကားလမ်းနံဘေးက ရွာလေးတစ်ရွာမှာရှိပါတယ်။ ရွာနာမည်က မျှော့တောကျေးရွာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ခြံအကျယ်ကြီးထဲမှာ လီလီပန်းခင်းကြီးနဲ့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ်သွားပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းအနားယူချင်တဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းပြီး ကဗျာဆန်လွန်းတဲ့နေရာလေးပါပဲ။
Hotel မဟုတ်ပဲ အိမ်ငှားသဘောမျိုး ဖြစ်တဲ့အတွက် hotel service မျိုးတော့မရပါဘူး။ Breakfast မပါဘူး၊ coffee/noodle တော့ ထားပေးထားပါတယ်။ မြို့ထဲကနေ စားစရာတွေပါ တစ်ခါတည်းဝယ်သွားရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ မြို့ထဲကို ကားနဲ့နာရီဝက်လောက်ပါပဲ။ Air-con မပါပါဘူး၊ ပန်ကာတော့ ပါပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်ရက်ကို ၃၀၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်နေလို့ရပါတယ်။ Extra ကြေးထပ်ပေးပြီး အများဆုံး လူကြီး ၃ ယောက်အထိပဲ နေလို့အဆင်ပြေမှာပါ။
?Kalaw Cabin ဆိုတော့ ကလောမှာရှိတာပေါ့နော်..?? အရမ်းလှတဲ့ ခေါင်မိုးချွန်သုံးထပ်အိမ်လေး..အိမ်အရှေ့ဖက် မျက်နှာစာက တောင်ရှုခင်း၊ အနောက်ဖက်မှာတော့ ထင်းရှုးတောရှုခင်းနဲ့..
သူငယ်ချင်းတွေ လေးငါးခြောက်ယောက် တစ်အိမ်တည်းစုနေ ထမင်းဟင်းတွေကိုယ်တိုင်ချက်စား၊ အကင်တွေကင်စား အဲ့လိုလေးနေချင်တယ်ဆိုရင် Kalaw Cabin ကကွက်တိပဲ.. အောက်ထပ်မှာနှစ်ယောက်ခန်းတစ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း နှစ်ခန်းပါမယ်။ အပေါ်ထပ်တွေမှာတော့ နှစ်ယောက်စီထပ်နေလို့ရမယ်။ အပေါ်ထပ်တက်တဲ့ လှေကားကအစ သစ်လုံးကြောင်လိမ်လှေကား ချစ်စရာလေး။ အပေါ်ထပ်တွေကတော့ မွေ့ယာလေးတွေထားထားပေးတယ်၊ လိုအပ်ရင် ကိုရီးယားဆန်ဆန်ခင်းအိပ်ယုံပဲ။ အပေါ်ဆုံးထပ် ထပ်ခိုးမှာဆို ပိုက်ကွန်အိပ်စင်လေး ထပ်ရှိသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေအတူ ဆိုကြမယ် ပျော်ကြမယ် အစီအစဉ်အတွက် ဂစ်တာလေး ထားထားပေးသလို ဂစ်တာမတီးတတ်ဘူးဆိုလည်း စိတ်မညစ်ပါနဲ့ Bluetooth Speaker လေးထားပေးထားပါတယ်။
တီဗီ၊ အဲယားကွန်း၊ ရေခဲသေတ္တာအပြင် အဝတ်လျော်စက်ပါ ထားထားပေးသေးတယ်။ ချက်ပြုတ်စားချင်သူတွေအတွက် မီးဖိုချောင်ရှိမယ်။ ကိုယ်တိုင်ဟင်းချက်စားကြမယ်ဆို ဘေးမှာလည်း စိုက်ခင်းလေးရှိသေးတယ်။ မနက်စာတော့ မပါဘူး။ ရေစိမ်ချင်သူတွေအတွက် သစ်သား Bath-tub လည်းရှိအုံးမယ်။ အဓိကအားသာချက်က အိမ်လှလှလေးထဲမှာ နေရာတိုင်းဓါတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းအောင် အသေးစိတ် အလှဆင်ထားတာပဲ..
လောလောဆယ်တော့ Cabin အကြီးတစ်လုံးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ ပိတ်ရက်တွေဆို စောစောကြိုစုံစမ်းဖို့လိုတယ်။
အခန်းဈေးက ပုံမှန်ချိန်ဆို တစ်ညကို တစ်သိန်းကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ ၄ ယောက်အထိနေလို့ရပါတယ်။ ၄ ယောက်အထက်ဆိုရင် extra charges ထပ်ပေးပြီး ၆ ယောက်အထိနေလို့အဆင်ပြေပါတယ်။
?လိပ်စာ – ရပ်ကွက် (၇)၊ မြက်ရဲအင်း၊ ကလောမြို့။
5.Eain at Mount Osei – Kalaw
?အိုးစည်တောင်ဆိုတာ ကလောမှာရှုခင်းကြည့်လို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေထဲက တစ်ခုပေါ့။ Eaint at Mount Osei ဆိုတာက အိုစည်တောင်ပေါ်တက်တဲ့ လမ်းပေါ်မှာရှိတာပါ။ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းပြီး ရှုခင်းကြည့်အပန်းဖြေဖို့ အရမ်းကိုသာယာတဲ့နေရာလေးပေါ့။ ကလောမြို့ထဲကိုတော့ ကားနဲ့ ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်လောက်ပါပဲ။ ဈေးက တစ်ရက်ကို ၆၀၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ လူလေးယောက်နေလို့ရမယ်။ ၂ ယောက်အိပ် ၂ ခန်းကို အောက်ထပ်မှာတစ်ခန်း၊ အပေါ်ထပ် ထပ်ခိုးမှာတစ်ခန်းပါပါတယ်။ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာအပြင် မီးဖိုချောင် ဧည့်ခန်းပါ ပါတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်အိမ်မှာနေရသလို ခံစားမိစေမှာပါ။ ရှုခင်းကြည့်ဖို့ ဝရန်တာလေးလည်း ပါပါတယ်နော်. ရှမ်းတောင်တန်းတွေနဲ့ ရှုမျှော်ခင်းအလှတွေက မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံနိုင်လောက်အောင် လှနေမှာပါ။ ဆောင်းတွင်းဘက်လာမယ်ဆိုရင် အိုးစည်တောင်ပေါ်ကို တောင်တတ်ခရီးတိုလေးထွက်ပြီး တိမ်ပင်လယ်ကြည့်လို့ ရသေးတယ်နော်..အိုးစည်တောင်ပေါ်ကနေဆိုရင် အောင်ပန်း၊ မြင်းကရွာ၊ ကလောမြို့ နဲ့ ရှမ်းတောင်တန်းတွေ၊ လွင်ပြင် စိုက်ခင်းတွေရဲ့ သဘာဝရှုခင်းအလှအပတွေကို အပေါ်စီးက တွေ့မြင်ရမှာပါ။
Eain at Mount Osei
6.Keinnara Hpa-an Lodge (ဘားအံ)
?ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမှာ ရှိပြီး luxury ပုံစံပါ။ သူ့မှာ ကရင်ရိုးရာ လုံးချင်း Bungalow တွေမှာတည်းလို့ရသလို သူ့မှာ sky dome ဆိုတဲ့ ရွက်ဖျင်တဲအိမ် ပုံစံ အခန်းအမျိုးအစားတခုပါဝင်တယ်။ ဘေးပတ်လည်ကိုမြင်ရတဲ့အပြင် ညဘက်ဆို ကြယ်တာရာကြီးတခုလုံးကို အခန်းထဲကပဲမြင်ရအောင်လုပ်ထားပါတယ်။ Sky Dome အခန်းက နှစ်ယောက်ခန်းဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးမှာ တစ်ခန်းပဲရှိတာပါ။
7.The Log (ဂေါ်ရင်ဂျီ)
?ဂေါ်ရန်ဂျီကျွန်းပေါ်မှာ အမြင့်ပိုင်းကျောက်ဆောင်ပြင်ကျယ်ပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ The Log Goyangyi ပါ။ အမြင့်ပိုင်းလေးပေါ်မှာ ဆောက်ထားတာဆိုတော့ ပင်လယ်ပြင်အလှကို အပေါ်စီးကနေ တမေ့တမော ခံစားလို့ရပါတယ်။ Log လေးတွေလည်း အများကြီး မရှိပဲ အဖွဲ့လိုက်သွားရင် ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းလေးပေါ်မှာနေရသလိုပါပဲ။ The Log ဘေးကနေ အောက်နားဆင်းလိုက်ရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေလေးလို့ ရေကူးလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်။
The Log – Goyangyi
ဒေသထွက်ကုန် လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ ပိုအားပေးဖြစ်မယ်..
လမ်းခရီးတစ်လျှောက်ရှု့ခင်းတွေကို တမေ့တမော ခံစားပစ်မယ်..
hotel, pyin oo lwin
← ဘာနည်းပညာအကူအညီမှမပါပဲ ကျောက်တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလက်နဲ့သာထွင်းထုပုံဖော်ထားတဲ့ ”ရွှေဘတောင်”
Things to do in Thandwe သို့မဟုတ် သံတွဲသို့သွားလည်ခြင်း အနုပညာ →